stainless ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း Tools များ - တရုတ် Richina
မော်ဒယ်အဘယ်သူမျှမ .: CV ကို-025
stainless ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း tools များအတွက်ခြွင်းချက်အမွေအနှစ်နှင့်အရည်အသွေးနှင့်အတူဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြသည် stainless ဥယျာဉ်ကိုစိုက်ပျိုး tools များ၏ဤအကွာအဝေးသမိုင်းနှင့်ထူးချွန်နှစ်ဦးစလုံး၏တစ်မူထူးခြားတဲ့ပူးပေါင်းကိုယ်စားပြုသည်။ မရေမတွက်နိုင်တဲ့သားစဉ်မြေးဆက်အဘို့အဥယျာဉ်မှူးများကအသိမှတ်ပြု, အဆိုပါလှလှပပသဘောပေါက်ပြာလက်ကိုင်ဖိုက်ဘာမှန်သို့မဟုတ်သတ္တုထက်လျော့နည်းတုန်ခါမှုအပူပိုင်းသစ်သားထက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်နှင့်ပိုပြီးရေရှည်တည်တံ့ဖြစ်ကြသည်။ စိုက်ပျိုး / တူးဖော်ခြင်း tools တွေအပေါ်ပိုရှည်လက်ကိုင်သာလွန်ခှနျအားမျိုးစုံ rivets အတူထူးခြားတဲ့အပိုရှည် lipped ခြေစွပ်ဖို့အစဉ်အလာလမ်းအတွက်ပူးတွဲနေကြသည်။ , ဒီမှ Add မှန်-ပွတ်သံမဏိအကြီးအကဲများနှင့်သင်နောက်ဆုံးမှတည်ဆောက် stylist နှင့်အလွန်အမင်း functional tool ကိုအကွာအဝေးရှိသည်။
စံပြရှာဖွေနေ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း Reviews Manufacturer & supplier ? We haveawide selection at great prices to help you get creative. All the Garden Cultivator Hand Tools are quality guaranteed. We are China Origin Factory of Stainless ဥယျာဉ်တော် Tools များ။ သင်သည်မည်သည့်မေးခွန်းရှိပါကကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။